Munchy's LEXUS Cheese Cream Sandwich 190gm (12pcs) ~ ICT.com.mm
HomeMunchy'sMunchy's LEXUS Cheese Cream Sandwich 190gm (12pcs)
Munchy's LEXUS Peanut Butter Cream Sandwich 190gm (12pcs)Back to Munchy'sMunchy's LEXUS Chocolate Cream Sandwich 190gm (12pcs)
Munchy's LEXUS Cheese Cream Sandwich 190gm (12pcs)
Flavor: Cheese Qty: 12pcs လွယ်လွယ်ကူကူ သယ်ဆောင်သွားလို့ရပြီး အလွယ်တကူသုံးဆောင်နိုင်တဲ့ Munchy’s LEXUS Cheese Cream Sandwich မုန့်ထုပ် (190gm) ဖြစ်ပါတယ်။ သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်ပြီး အာဟာရပြည့်ဝတဲ့ မုန့်ထဲမှာ ချိုမြိန်မွှေးပျံ့တဲ့ အနံ့အရသာနဲ့ Cheese Calcium ကို ပေါင်းစပ်ပေးထားတာကြောင့် ချိစ်အရသာ နှစ်ခြိုက်သူတွေ အကြိုက်တွေ့မှာပါ။ အရေအတွက် ၁၂ ခုပါဝင်ပါတယ်။ Your days... [Learn more]
လွယ်လွယ်ကူကူ သယ်ဆောင်သွားလို့ရပြီး အလွယ်တကူသုံးဆောင်နိုင်တဲ့ Munchy’s LEXUS Cheese Cream Sandwich မုန့်ထုပ် (190gm) ဖြစ်ပါတယ်။ သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်ပြီး အာဟာရပြည့်ဝတဲ့ မုန့်ထဲမှာ ချိုမြိန်မွှေးပျံ့တဲ့ အနံ့အရသာနဲ့ Cheese Calcium ကို ပေါင်းစပ်ပေးထားတာကြောင့် ချိစ်အရသာ နှစ်ခြိုက်သူတွေ အကြိုက်တွေ့မှာပါ။ အရေအတွက် ၁၂ ခုပါဝင်ပါတယ်။
These calcium vegetable crackers are packed with smooth and creamy indulgent fillings. Equipped with the perfect mix of sweet and savoury, these crackers will complete one’s satisfaction.
LEXUS Cheese Cream Sandwich
Vegetable cracker sandwich packed with smooth and creamy cheese fillings, the taste that completes one’s satisfaction.